Xildhibaan Somalisujuu ah oo ka mid noqday dad ku dhaawacmay bambaano lagu tuurey dad masaajid ku cibaadeysanayey gudaha Mgaalada Nairobi | Somalisan.com Home
Xildhibaan Somalisujuu ah oo ka mid noqday dad ku dhaawacmay bambaano lagu tuurey dad masaajid ku cibaadeysanayey gudaha Mgaalada Nairobi 12/8/2012 11:37:00 Qaraxa oo ahaa Bam gacanta laga tuuro ayaa lala beegsaday dadkii Masjidka ka soo baxay ee salaadda cishaha tukaday, iyadoo qofkii qaraxaas tuurayna uu baxsaday, halka warar kalena ay sheegayaan in qaraxu ahaa mid waddada dhinaceeda lagu aasay, balse dhab ahaan looma oga taas. Qarax caawa Salaaddii cishaha kadib ka dhacay albaabka hore ee laga galo Masjidka Al-Hidaaya ee ku yaala xaafadda Soomaalida degto Islii ee magaalada Nayroobi dalka Kenya ayaa waxaa ku dhaawacmay xildhibaan Yuusuf Xasan ee laga soo doorto xaafadda Kamukunji ee Soomaalidu degto iyo dad kale. Qaraxa oo ahaa Bam gacanta laga tuuro ayaa lala beegsaday dadkii Masjidka ka soo baxay ee salaadda cishaha tukaday, iyadoo qofkii qaraxaas tuurayna uu baxsaday, halka warar kalena ay sheegayaan in qaraxu ahaa mid waddada dhinaceeda lagu aasay, balse dhab ahaan looma oga taas. Ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa goobta tegay, waxaana dadka dhaawacmay loola cararay Isbitaalka Afueni ee magaalada Nayroobi, iyadoo dadka dhaawacmay qaarkood dhaawacoodu ahaa mid aad u daran. Wararku waxa ay sheegayaan in dhaawaca xildhibaanka loo qaaday Isbitaalka Aga Khan halka dhaawacyada kale la geeyay Isbitaalka Afueni. Xalay ayay ahayd markii uu qarax xooggan ka dhacay xaafadda Soomaalidu degto Islii ee magaalada Nayroobi, waxaana ku dhintay qaraxaas hal qof, Siddeed kalena wey ku dhaawacmeen. Lama oga ujeeddooyinka ka dambeeya qaraxyadaas sida xiriirka ah uga dhacaya magaalada Nayroobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu degto ee Islii iyadoo halkaasi ay ku badan yihiin Soomaalida